अटो लोन सहज बनाउँदा मध्यमवर्गको कार चढ्ने सपना पूरा हुन्छः करण चौधरी (अन्तर्वार्ता) - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
अटो लोन सहज बनाउँदा मध्यमवर्गको कार चढ्ने सपना पूरा हुन्छः करण चौधरी (अन्तर्वार्ता)
नेपालखबर काठमाडौं बैशाख २७
‘नेपालमा धेरै कारहरु अटो लोनअन्तर्गत नै किनिन्छन्। यसले मध्यमवर्गका मानिसको पनि कार चढ्ने सपना पूरा गर्छ। तर अहिलेको अटो लोन नीतिले उपभोक्तालाई आफ्नै गाडीको मालिक हुनबाट रोक्न खोजेको छ।’
सीजी मोटोकर्प चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको अटोमोबाइल कम्पनी हो। यस कम्पनीले विगत ३० वर्षयता नेपालमा अटो व्यवसाय गर्दै आएको छ। सीजी मोटोकर्पका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीसँग नेपालखबरको सहप्रकाशन अटोस्पीड म्यागेजिनले गरेको वार्ताः
व्यावसायिक घरानाको सदस्य तपाईं आफैंचाहिँ अटोमोबाइल व्यवसायमा कहिलेदेखि संलग्न हुनुभयो?
म सानैदेखि नै हाम्रो ग्रुपको अटोमोबाइल व्यवसायमा संलग्न रहँदै आएको छु।
चौधरी ग्रुपका धेरै किसिमका व्यवसाय छन्। पारिवारिक जिम्मेवारी बाँडफाँट अनुसार तपाईं अटो व्यवसायमा केन्द्रित हुनुभएको हो?
अटोमोबाइल मेरो प्यासन नै हो। त्यसकारण स्वाभाविक रुपले यसमा आकर्षित भएको हुँ तर मैले अन्य व्यवसायहरु ल्युब्रिकेन्ट बिजनेस, रेमिट्यान्सलगायत पनि हेरिरहेको छु।
नेपालमा अहिले अटोमोबाइल व्यवसाय कस्तो छ?
अटोमोबाइलको कुरा गर्नुपर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्नेमध्ये यो उद्योग व्यवसाय पनि एक हो। यो कुरा सबैलाई थाहै छ। अझ भन्नुपर्दा यो त्यस्तो उद्योग व्यवसाय हो जहाँ विविध किसिमका बाहिरी कुराहरुको बढी प्रभाव पर्ने गर्दछ। पछिल्लो समय सवारीसाधन कर्जामा लागू गरिएको कडा सरकारी नीतिले गर्दा अहिले अटो व्यवसायको अवस्था सन्तोषजनक छैन। यसले आर्थिक वृद्धिमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ।
नेपाली ग्राहकले पछिल्लो समय कस्ता गाडीहरु रुचाएका छन्?
नेपालमा ह्याचब्याक कारहरु ग्राहकले अत्यधिक रुचाएका गाडीमा सधैँ पर्ने गर्छन्। यस किसिमका गाडीको आकार पनि सिटी राइडिङका लागि ‘पर्फेक्ट’ छ। धेरै माइलेज दिने, आरामदायी सुविधा भएको, सुरक्षित र भरपर्दो फिचरका कारण यसको बजार माग बढ्दो छ। अब हामी ग्राहकको मागतर्फ केन्द्रित हुँदै उपयोगी किसिमका गाडीहरु ल्याउने तयारीमा छौँ। बजारमा कम्प्याक्ट एसयूभी गाडी ल्याएर यस्तो माग सम्बोधन गर्दै छौँ। यो गाडीले कच्ची सडकमा निकै मद्दत गर्नसक्छ भने अफरोडमा जान पनि ग्राहकलाई सजिलो हुन्छ।
बैंकको अटो लोन प्रवाह नीतिप्रति धेरै कार व्यवसायीको असन्तुष्टी छ। यसले व्यवसायमा कस्तो असर पुर्याएको छ?
नेपालमा धेरैभन्दा धेरै कारहरु अटो लोनअन्तर्गत नै किनिन्छन्। यसले मध्यमवर्गका मानिसको पनि कार चढ्ने सपना पूरा गर्छ। तर अहिलेको अटो लोन नीतिले कार उद्योगलाई मात्र हैन, राष्ट्रिय आम्दानीलाई पनि असर गरिरहेको छ। उपभोक्तालाई आफ्नै गाडीको मालिक हुनबाट अहिलेको नीतिले रोक्न खोजेको छ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले अटोमा ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो वर्ष ६५ प्रतिशत पु¥याएर केही खुकुलो त भएको छ नि, होइन?
यो अटोमोबाइल व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने नीति हो। यसले यो व्यवसायमा संलग्न हजारौँ मानिसलाई नराम्ररी प्रभाव पार्छ।
ग्राहहरुले गाडी र मोटरसाइकलमध्ये कुन चाहिँ बढी लोनमा खरिद गरिरहेका छन्?
हामी चार पांग्रे सवारीसाधन किनबेचमा संलग्न भएकाले मोटरसाइकलबारे केही भन्न सक्दैनौँ। अटो लोनअन्तर्गत धेरै किनबेच हुने पनि चार पांग्रे सवारीसाधन नै हो।
फाइनान्स प्रदान गरेर गाडी बिक्री गर्दा र फुल पेमेन्टमा बिक्री गर्दा व्यवसायीलाई के फरक पर्छ?
साँच्चै भन्नुपर्दा कुनै फरक छैन। ग्राहकको रुचिअनुसार दुवै तरिकाले व्यवसाय गर्न पाउँदा हामी उत्तिकै खुसी हुन्छौं।
फरक प्रसंग, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल तपाईंहरुको छाता संगठन हो । यसले व्यवसायीका समस्या एकद्वार प्रणालीबाट उठान गर्ने भए पनि अहिले त्यसमा बढी राजनीति भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, के भन्नुहुन्छ?
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले सधैँ देशको अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराहरुमा काम गर्दै आएको छ। यो क्षेत्रमा राजनीति घुसेको छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। किनकि यसमा संलग्न सबै जना स्थापित उद्यमी व्यवसायीहरु छन्। हो, केही कुरामा असहमति हुनसक्छ तर त्यो पनि यो व्यवसायकै हितका लागि हो भन्ने मेरो विश्वास छ।
तपाईं आफैँ पनि यो संगठनको कार्यसमितिमा हुनुहुन्छ। समस्या समाधानका लागि के प्रयास भइरहेको छ?
मैले अगाडि नै भनेँ नि यो संस्थामा बाहिर भनिएजस्ता मुद्दाहरु नै उठेका छैनन्।
पछिल्लो कार्यसमिति अलि कमजोर भयो, अध्यक्षको कुरा कसैले सुन्दैनन् भन्ने कुरा पनि छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ?
अध्यक्ष भनेको यो संस्थामा सधैँ सम्मानित हुन्छ। अघि पनि भनेँ तपाईंले माथि उठाएका कुराहरु संस्थामा छँदै छैनन् भन्दा हुन्छ। अहिलेका अध्यक्ष यही उद्योग व्यवसायको क्षेत्रबाटै चुनिनु भएको हो। उहाँलाई सबैले चिनेकै थिए, छन् पनि। उहाँ एक स्थापित र व्यावसायिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले व्यवसाय सुरु गर्दादेखि नै यसको प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा धेरै अनुभव हासिल गरिसक्नुभएको छ।
नाडामा तपाईंको अग्रसरता कस्तो रहन्छ? आगामी निर्वाचनको बारेमा केहि सोच्नुभएको छ?
तत्काललाई अहिले कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु। पछि के हुन्छ हेरौँ। भविष्यको कुरा भविष्यलाई नै छोडिदिउँ।
फेरि सुजुकीकै कुरा गरौँ, नेपाली बजारमा बिक्रीको हिसाबले तपाईंको कम्पनीका गाडीहरु हाल कुन पोजिसनमा छन्?
नेपालमा हामी नै सबैभन्दा ठूलो सवारीसाधन बिक्री ब्रान्ड हौँ। यति नै भन्न चाहन्छु।
नेपाली बजारमा आउनै लागेका सुजुकी ब्राण्डका नयाँ प्रोडक्टहरु के के हुन्?
हामीसँग धेरै त्यस्ता प्रडक्टहरु आउने क्रममा छन्, ती सबै उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्छौँ। बजारमा हल्ला त चलिहाल्छन् तर हामी समय मिलाएर आधिकारिक रुपमै सार्वजनिक गर्छौँ। हो, हामीले आगामी दिनमा सार्वजनिक गर्ने गाडीहरुमा अहिलेका कारहरुमा भन्दा केही न केही नयाँपन अवश्य हुन्छ। प्रतीक्षा गरौँ।
तपाईं आफैं अटो व्यवसायी हुनुहन्छ। अटो उपभोगमा कत्तिको सोख छ?
यो मेरा लागि अन्य कुराभन्दा व्यावहारिकताको कारणले हो।
सुजुकीको अहिलेसम्म ग्राहकले धेरै रुचाएको कार वा मोटरसाइकलको नाम लिनुप¥यो भने...?
ग्राहकलाई धन्यवाद नै भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म हाम्रा सबै किसिमका कारहरुलाई उहाँहरुले रुचाउनु भएको छ। संख्याको हिसाबले अब नामै लिएर भन्नैपर्ने हुँदा भिटारा ब्रेज्जा, सेलेरियो, स्विफ्ट र अल्टो अग्रपंक्तिमा आउँछन्।
अन्त्यमा, चौधरी ग्रुप सुजुकीसँग व्यावसायिक रुपमा कसरी कहिले जोडियो?
यसको इतिहास त धेरै लामो छ। देशमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई व्यावसायिक रुपले विकास गर्नेमा थोरैमध्ये साधन र स्रोतको हिसाबले हामी पनि पर्छौँ। भारतमा मारुती र सुजुकीले संयुक्त रुपमा व्यवसाय गर्नुअगाडि नै हामीले सुजुकीलाई नेपाल ल्याइसकेका थियौँ। यस हिसाबले भन्नुपर्दा यो क्षेत्रमा हाम्रो तीन दशकभन्दा लामो योगदान छ।
प्रकाशित २७ बैशाख २०७६, शुक्रबार | 2019-05-10 08:21:48
लगानी साझेदारी गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको योजनाअन्तर्गत तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले पाँच योजना छनोट गरेको छ।
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि आन्तरिक उडान गर्दै आएको यती एयरलाइन्सले विमान थप्ने क्रमलाई तीब्रता दिएको छ।
गैरकानुनी रुपमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरी ठगी गर्ने ८ जनालाई महानगरीय अपराध महाशाखा, टेकुबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व नतिरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयले खुलासा गरेको छ।
सञ्चारकर्मी रवी लामिछोको पहलमा निर्माणाधिन कालिकोटको रास्कोट अस्पताललाई पुष्पतारा केडिया सेवा फाउण्डेशन र श्री स्टील्स् प्रालिले आर्थिक सहयोग गरेका...
निशानको प्रि–बजेट अफर, लाखौँको लाभ लिन सकिने
नेपालका लागि निशान मोटर्सद्वारा उत्पादित गाडीहरुको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्प प्रालिले प्रिबजेट अफर ल्याएको छ।